Ungayifaka njani i-forklayer kwi-LG tv smart? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ungayifaka njani i-forklayer kwi-LG tv smart?
Inkqubo, isicelo okanye iwijethi; I-Fork Playerquot; yeTV yeTV eyiyo (i-Smart TV) yenzelwe ukubukela imovie kwi-intanethi kwi-LG tv yakho.
Ukulungiselela ukufaka le widget / le sicelo, landela imiyalelo engezantsi:
Ukuba, xa uzama ukufakela, i-flash drive yakho nesicelo se-TV ayibonwa, zama ukufomatha i-USB flash drive okanye ukuyifaka kwenye.
Eyona ndlela ilula yokufaka le nkqubo kwiTV kukukhuphela kunye nokuyifaka ngedijithali.
Kuya kufuneka wenze oku: khuphela inkqubo ngokwayo kule ndawo, size siyilahle kwi-USB flash drive kwaye sinamathele kwi-USB flash drive kwimidiya yedijithali kwaye siyifaka kwi-TV uqobo.
Kwaye akukho enye into - le yeyona ndlela ilula yokufaka!
Iwijethi yeFkPlayer iluncedo; ungayisebenzisa ukubukela imiboniso bhanyabhanya eyahlukeneyo kunye nemiboniso kunxibelelwano lwe-Intanethi.
Ungayifaka lewijethi ngeendlela ezininzi ngexesha elinye:
1 indlela -Ungayifaka iwijethi ngotshintsho lwe-DNS
Imiyalelo yeTV ekhutshwe kunye 2010 iminyaka.
Imiyalelo yeeTV ekhutshiweyo kunye nenkqubo yokusebenza IWebOS okanye INetcast inguqulelo 2.0, 3.0, 4.0 okanye 4.5.
2 indlela -Ungayifaka iwijethi usebenzisa idrive drive.
Imiyalelo yeeTV ekhutshiweyo kunye nenkqubo yokusebenza IWebOS.
Ukuvula indawo yogcino, kuya kufuneka uyikhuphe kuqala, kwaye ungayikhuphela kwikhonkco.
Imiyalelo yeTV ekhutshwe kunye Ngo-2010 ukuya ku-2013.
Ukuba ngesizathu esithile awukwazi ukufaka i-ForkPlayer kwi-USB drive drive, kuya kufuneka ufomati ye-USB flash drive kwaye uzame ukufaka kwakhona.
I-Fork Player kukukwazi ukusebenzisa i-Smart TV ukubona i-Intanethi ukuze uvule iinethiwekhi zentlalo, iiforamu kunye nezinye iisayithi ezivela kwisikrini esikhulu. Ungasifaka i-ForkPlayer ukusuka kwi-flash drive okanye kwiserver ye-DNS. Nantsi indlela yokufaka le bhrawuza kwi-flash drive:
Nantsi imigaqo yokufaka iFor Player kuMncedisi we-DNS:
Ndicebisa ukuba uthathele ingqalelo ukufaka usetyenziso lweForkPlayer usebenzisa idrive drive, kodwa kule nto kufuneka uqale uqonde ukuba yeyiphi inkqubo esebenzayo kwi-LG Smart TV yakho.
Zimbini iindlela onokubeka ngazo uNetcast kunye neWebOS.
Ukuze ufake i-ForkPlayer kwi-LG tv elungileyo, unokukhuphela ngokulula inkqubo oyifunayo. Emva koko yisebenzise kwakhona kwimidiya yedijithali kwaye uyixhume ngqo kwiTV yakho. Kwaye emva koko uye kwimemori khadi kwimenyu kwaye uvule i-ForkPlayer.
Khuphela indawo yokugcina kweli khonkco
Imibuzo ye-22 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,469.